60 धेरै सुरुचिपूर्ण र सफा नि: शुल्क टम्बलर थिमहरू क्रिएटिव अनलाइन
फ्रान् मारिन | | वस्तु
तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने Tumblr थिमहरूयहाँ तपाईले सबै स्वादका लागि विषयवस्तुहरूको प्रभावशाली चयन भेट्टाउनुहुनेछ जुन यस प्लेटफर्ममा तपाइँलाई तपाइँको ब्ल्ग लाई पूरै अनुकूलन गर्न अनुमति दिनेछ।
माइक्रोब्लगिंगमा प्रवेश गर्नका लागि सिफारिश गरिएका विकल्पहरूमध्ये सायद टम्बलर सबैभन्दा मान्यता प्राप्त र प्रसिद्ध छ। WordPress वा ब्लगर जस्तै, यो हाम्रो अनलाइन सामग्री सिर्जना र विकास गर्न हामीलाई असंख्य उपकरणहरू प्रदान गर्दछ, यद्यपि यदि त्यहाँ केहि छ जुन यस प्लेटफर्मलाई बाँकिबाट भिन्न गर्दछ, यो यसको सौन्दर्य भावना हो। टम्बलरमा छवि पाठ सामग्रीमा भर पर्छ त्यसैले यी हाम्रो साइट परिभाषित गर्दा एक बुनियादी भूमिका प्राप्त गर्दछ र उदाहरणका लागि पोर्टफोलियोहरू सिर्जना गर्न यो एक धेरै सफल विकल्प बनाउँछ। यसको सहज ज्ञान युक्त प्रकृति र सुविधाहरू यसले हामीलाई अनुकूलित र हाम्रो साइटहरू निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्दछ यसलाई वास्तुकार र ग्राफिक डिजाइनरहरूद्वारा प्रयोग गरिएको विकल्पहरू मध्ये एक बनाउँदछ।
डिजाइन स्तरमा, यसले हामीलाई एक प्रदान गर्दछ विकल्प धेरै र टेम्पलेटहरू जुन हाम्रो ब्लगको कोटी वृद्धि गर्दछ। वास्तवमा त्यहाँ नेटमा यी प्रकारका टेम्पलेटहरू धेरै विविधता अनुकूलन विकल्पहरूको साथ छन्। टम्बलर आफैंले प्रस्ताव गरेका विकल्पहरू मध्ये, हामी समाधानहरूलाई निम्न कोटीहरूमा विभाजित गर्छौं: एक स्तम्भ, दुई स्तम्भहरू, ग्रिड, विषयवस्तु विशेष रूपमा साइटहरूको लागि विकसित गरियो जुन पाठ्य सामग्री, न्यूनतम, विविध र उच्च रिजोलुसनको अधिक मात्रा होस्ट गर्दछ। आज हामी तपाईसँग साझेदारी गर्न को लागी एक रमाईलो को लागी शेयर गर्न चाहन्छौं साठ नि: शुल्क टम्बलर थिमहरू जुन धेरै रमणीय छ र सौंदर्य र पेशेवर समाप्त प्रदान गर्दछ।
1 एक स्तम्भमा Tumblr थिमहरू
2 दुई-स्तम्भ Tumblr थिमहरू
3 ग्रिड टम्बलर थिमहरू
4 पाठ सामग्री होस्टिंग को लागी आदर्श
5 न्यूनतम टम्बलर थिमहरू
6 उच्च रिजोल्यूशन टम्बलर थिमहरू
7 Free० नि: शुल्क टम्बलर थिमहरू
एक स्तम्भमा Tumblr थिमहरू
फ्ल्याट र color्ग हेडर र प्रमुख शीर्षक। उच्च कन्ट्रास्ट रंग समाधान प्रयोग गर्नका लागि आदर्श। दायाँ साइडबार, फ्ल्याट फुटर जुन लेखकको विभिन्न सामाजिक आइकनहरू एकीकृत गर्दछ।
धेरै गतिशील र साधारण इन्टरफेसको साथ सामग्री डिजाइनको एक उदाहरण। अस्थायी तत्त्वहरू र न्यूनतम फिनिश जुन स्फूर्तिदायी हावा प्रदान गर्दछ। यसले पर्याप्त कम साइड मेनू समावेश गर्दछ जुन तपाईंको पाठकहरूलाई छिटो र फुर्तिले तपाईंको साइट नेभिगेट गर्न अनुमति दिनेछ।
शीर्ष मेनू जुन स्वचालित रूपमा लुकेको छ र हामीलाई बटनमा क्लिक गर्दा यसलाई प्रकट गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। एक निश्चित हेडि when जब स्क्रोल गर्दै छ र सामान्यतया एक अत्यधिक न्यूनतम समाधान जसले पाठ सामग्रीमा ठूलो महत्त्व राख्दछ।
क्लासिक ईन्टरफेस। यसको संरचनाले पुरानो विद्यालयको रेखा पछ्याउँछ। यसले कुनै पनि प्रकारको अस्थायी तत्त्व समावेश गर्दैन र यसले स्क्रोलि when गरेको बेला निश्चित हेडर समावेश गर्दैन। तपाईंको लागि आदर्श यदि तपाईं क्लासिक, स्पष्ट र सरल समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ।
ओस्लोले हामीलाई प्रदान गर्ने संरचनासँग धेरै समान छ। क्लासिक र धेरै सहज इंटरफेस यद्यपि यसमा शीर्ष मेनू पनि समावेश छ जुन कि त निश्चित गरिएको छैन। आदर्श यदि हाम्रो लक्ष्य एक मानक ब्लग सिर्जना गर्न र जानकारीको सरल र स्पष्ट प्रसारण गर्नु हो।
रचनात्मक वातावरणमा कलाकार र पेशेवरहरूको लागि डिजाइन गरिएको। फ्लोटिंग बायाँ मेनूको साथ पूर्ण रूपमा न्यूनतम समाप्त, केहि सजिलो ट्रान्जिसनहरू र फ्ल्याट एलिमेन्टहरू।
दुई-स्तम्भ Tumblr थिमहरू
सरल साथै सुरुचिपूर्ण। यसले तपाईंलाई र element्गको सर्तमा कुनै पनि तत्वलाई अनुकूलित गर्न र फोटोसेट्सलाई दुई-स्तम्भ मोडमा सेट गर्न अनुमति दिन्छ। छविहरूको रूपमा जानकारीको समान स्तरमा पाठसँग मेल खानका लागि आदर्श।
यो लगभग पप-कला हावाको साथ एकदम हडताल गर्ने समाधान हो जुन यसको संरचनामा फ्लोटिंग साइड मेनू र बटन र पाठ्य सामग्रीहरूको लागि हडताल हभर समाधानहरू। सबै को लागी आदर्श जो फैशन को दुनिया को लागी समर्पित छन् या लाई आकर्षित छन्।
यसले व्यावहारिकता र औपचारिकतालाई एक धेरै रोचक समाधानमा मिलाउँछ। यसको संरचनामा त्यहाँ पाठ र छविहरू बीच पर्याप्त उपस्थिति छ। यसले एउटा माथिल्लो क्षेत्र प्रस्तुत गर्दछ जुन सामग्री र चित्रित लेखहरूको लागि ग्यालरीको रूपमा काम गर्दछ र हाम्रो साइटको लोटोगाइप समावेश गर्न हेडरको साथ एक साधारण मेनू मुनि।
युवा र अनौपचारिक हावाको साथ ठाउँका लागि सरल र क्याजुअल टेम्पलेट आदर्श। फ्लैट शैलीमा कभर र बटन छविहरूमा होभर गर्नुहोस्। चाखलाग्दो।
यो एक काफी शांत पत्रकारिता शैली प्रस्तुत गर्दछ। यसको संरचना धेरै रमाईलो छ किनकि त्यहाँ ठूलो खाली क्षेत्रहरू छन् जुन पढ्न शान्त हुन्छन्। दुबै यसको शीर्ष मेनू र यसको साइडबार प्रयोगकर्ता स्क्रोलिंगको बावजुद स्थिर रहन्छ।
कुनै श doubt्का बिना मेरो मनपर्ने टेम्प्लेटहरू मध्ये एक हो। एक साइड मेनू प्रस्तुत गर्दछ जुन बटन मार्फत प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यस मामिलामा व्याप्त सामग्री प्रख्यात ग्राफिक हो र प्रत्येक लेखको मिति लेबलको रूपमा देखा पर्दछ (लगभग एनालग फोटोग्राफहरूको सौंदर्यशास्त्र अनुकरण गर्दै)। कुनै पनि प्रकारको सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि सिफारिस गरिएको।
ग्रिड टम्बलर थिमहरू
एकदम आकर्षक टेम्प्लेट तर अनौपचारिक बारीकियोंको साथ जुन ग्राफिक सामग्रीमा अधिक उपस्थिति प्रदान गर्दछ। एक शीर्ष मेनू र निश्चित साइडबार जारी राख्नुहोस्। यो एकदम शान्त हुन र केही गतिशील तत्त्वहरू जस्तै शीर्षकहरू सहितको लागि बाहिर खडा छ।
निश्चित साइड मेनू र संरचना जारी राख्नुहोस् जुन धेरै अर्डर तत्वहरूको सहारा बिना नै उत्तम अर्डर र पढ्ने योग्यता प्रदान गर्दछ। अनौपचारिक सामग्री को निर्माण गर्न को लागी उन्मुख।
ग्राफिक जानकारीको लागि र एकदम गतिशील तत्त्वहरूको साथ डिजाइन गरिएको स्पेस। सबै तत्वहरूमा हूवर ट्रान्जिसन सुविधाहरू र फ्लैट ह्यूजमा समाधान हुन्छ र सफा, पेशेवर लुकमा।
ग्रिड जसले ठूलो संख्यामा पाठ र छवि तत्वहरू समावेश गर्दछ। एक साधारण शीर्ष मेनू र एक धेरै अनुकूल र पूरा इन्टरफेस।
छवि पेशेवरहरूका लागि विभागहरूका लागि टेम्पलेट डिजाइन। फिक्स्ड र तैयार साइड मेनू छविहरूको एक ठूलो संख्या होस्ट गर्नका लागि जुन उनीहरूका लागि बोल्छन्।
मुख्य ग्राफिक, यो एक माहौल शून्य देखि मुख्य पृष्ठमा मिनेट शून्य देखि आफ्नो चित्रहरु साझा गर्न को लागी डिजाइन गरीएको एक वातावरण हो र स्क्रोलमा आलस्य shit संग।
पाठ सामग्री होस्टिंग को लागी आदर्श
ती मध्ये धेरै अधिक विस्तृत संरचना छ कि चित्र को रूप मा ग्राफिक सामग्री र लेख वा पाठ को रूप मा सामग्री को लागी दुबै ठाउँ छोड्छ। ती मध्ये प्रत्येक सामग्री को केहि प्रकार को प्रसार मा लक्ष्य छ, अधिक सुरुचिपूर्ण, अनौपचारिक वा व्यावसायिक समाधान खोज्न। तिनीहरू तिनीहरूबाट अलग छन्:
कला उनले भनिन्
न्यूनतम टम्बलर थिमहरू
कम बढी हो, त्यसैले किन टम्बलरले सामग्रीको विकास र प्रसारको लागि समर्पित सुरुचिपूर्ण टेम्प्लेटहरू विकास गर्न मिनिमलिज्मको विविधतालाई वेवास्ता गरेको छैन। सामान्यतया यी समाधानहरू अधिक ठोस, सुरुचिपूर्ण र पेशेवर देखिन्छन्, अधिक परिपक्व सिर्जनाकर्ताहरूको विशिष्ट।
पप ग्यालरी लाइट
उच्च रिजोल्यूशन टम्बलर थिमहरू
यस कोटी भित्र हामी ग्रिड समाधानहरू फेला पार्न सक्छौं, एक वा दुई स्तम्भहरू वा न्यूनतम जो केही बढी डिमांड सामग्री क्रिएटरहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यी प्रस्तावहरुको गुणवत्ता केहि उच्च छ, यहाँ केहि धेरै आकर्षक उदाहरणहरु छन्:
Free० नि: शुल्क टम्बलर थिमहरू
ओस्प्रे: एकदम सजिलो। लोगो, वर्णन र मेनूको साथ बाँया साइडबार। दाँयामा, सबै छविहरू।
रेखा: साइट शीर्षक र वर्णन शीर्ष मा केन्द्रित। तल, छविहरू। फुटरको रूपमा, मेनू।
मुक्ति: शीर्षक र वर्णनको साथसाथै तपाईंसँग मेनू पनि शीर्षमा केन्द्रित हुन्छ।
ओकाथेम: शीर्षक, वर्णन, मेनू र आइकनहरूको साथ बाँया साइडबार। दाँया पट्टि, तपाइँको काम।
स्वच्छ (उत्तरदायी) खोज ईन्जिन र सोशल मिडिया आइकनको साथ शीर्षमा समावेश गरियो। अर्को, शीर्षक, वर्णन र मेनू।
अवलोकनकर्ताले (उत्तरदायी): टेम्प्लेट पाठलाई बढी महत्त्व दिन डिजाइन गरिएको।
पत्ता लगाउनुहोस्: फराकिलो सेतो फ्रेमको साथ छविहरू, पृष्ठभूमि एक छवि।
खाँबो: एकल स्तम्भ, ब्लग जस्तै।
छायाँ: बायाँ साइडबारको साथ जहाँ हाम्रो मेनू हुनेछ र दायाँमा ठूलो क्षेत्र जहाँ हाम्रो सामग्री प्रदर्शित हुनेछ।
Alta: तीन स्तम्भहरू र मेनू केन्द्रितको साथ।
फिज: सेतो फ्रेम र एक प्रकारको बजलको साथ छविहरू।
शब्दहरू: माथिल्लो क्षेत्रमा लोगो र मेनू।
डिलक्स: सबै कुरा हाम्रो स्क्रिनमा फ्लोट जस्तो देखिन्छ।
टोन: धेरै विशिष्ट, दायाँ छेउमा साइडबारको साथ
मिनेट थिम: साहित्यिक ब्लगका लागि उत्तम टेम्प्लेट
तपाई 60० को यस छनौटको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? टम्बलर विषयवस्तुहरू पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छन्?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » वस्तु » Tumblr का लागि विषयवस्तु
Okatheme उत्तम विषयवस्तु हो जुन मैले खोजिरहेको थिएँ, धेरै धेरै धन्यवाद Lúa :)
NESTicle लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई स्वागत छ! मलाई खुशी छ कि पोस्ट तपाईको लागि उपयोगी छ।
फर्नान्डा गोन्जालेज भन्यो
म केहि बुझ्दिन, मैले शीर्षकहरूको शीर्षक राखें र ती देखा पर्दैन, सहयोग :(।
फर्नाडा गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईले प्रतिलिपि गर्नुपर्दछ HTML हो र विषयवस्तु सम्पादन गर्ने ठाउँमा यसलाई टाँस्नुहोस्। मलाई थाहा छैन तपाईले विषयको नाम कहाँ राख्नु हुन्छ तर मलाई लाग्छ कि तपाई अलमल्ल हुनुभयो। म सुझाव दिन्छु कि तपाई ट्यूटोरियल हेर्नुहोला, यो तपाईको विचार भन्दा सजिलो छ।
सम्पर्क फारमहरूको लागि उत्तम लेआउटहरू बनाउनुहोस्